Podcasts တွေကသူတို့ရဲ့တီထွင်မှုအသံတွေကိုစျေးကွက်ဘယ်လိုတင်ပေးနိုင်မလဲ @IBCShow | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » အသားပေး » ဘယ်လို Podcasts သူတို့ရဲ့ဖန်တီးမှုအသံရောင်းချနိုင်သလား @IBCShow
ဘယ်လို Podcasts သူတို့ရဲ့ဖန်တီးမှုအသံရောင်းချနိုင်သလား @IBCShow
တီထွင်ဖန်တီးမှုငါတို့ရှိသမျှသည်ကိုအတွင်းပိုင်းရှိရုံအရည်အသွေးမဟုတ်ပါဘူး။ အများကြီးပိုမိုမြင့်မားအသုံးအနှုန်းများမှာ, တဦးတည်းရဲ့ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာတည်ထောင်များအတွက်အခြေခံဖြစ်ပါတယ်။ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးကသူတို့တီထွင်ဖန်တီးမှုမှတဆင့်၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာဖွဲ့စည်းလို့ရပါတယ်နည်းလမ်းများစွာရှိပါတယ်။ ယခုငါတို့နည်းပညာဆိုင်ရာတီထွင်ဆန်းသစ်မှုတစ်ခုထက်ပိုသောဒီဂျစ်တယ် oriented အသက်အရွယ်မှာနေထိုင်ကြောင်း, ကိုယျ့ကိုယျကိုဖော်ပြ၏အလုံအလောက်နည်းလမ်းများနှင့်အကြှနျုပျတို့၏အလိုဆန္ဒအတိုင်းစစ်မှန်ဖြစ်တောင်းစားသကဲ့သို့ကောင်းစွာကြားသိစေခြင်းငှါအသေခံကြောင်းငါတို့ရှိသမျှသည်ကျွန်တော်တို့ကိုအတွင်းအပြင်ရှိသည်ဖန်တီးမှုစကားသံကိုထက်ပိုရှိသည် ကအလားအလာရှိနိုင်ပါသည်အမှတ်တံဆိပ်ကနေတဆင့်ဆက်သွယ်ပြောဆို။ မည်သို့ပင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖန်တီးမှုအရသာသို့မဟုတ်ကြိုးပမ်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အရေးအသား၏မတ်ေတာ, ပန်းချီ, ကဗျာ, ဒါမှမဟုတ်ရုပ်ရှင်ရုံမှတဆင့်ဖြစ်, မုသာမသုံးဘယ်မှာ၏, ငါတို့ထက် သာ. ကြီးမြတ်သောအမှတ်တံဆိပ်အဝေးရောက်ပြီးမြောက်နိုင်သည့်များ၏ထိရောက်မှုအရှိဆုံးနှင့်ကျယ်ပြန်နည်းလမ်းများ Podcast တခုကို၏ဆန်းသစ်အသုံးပြုမှုအတွင်းတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။
တစ်ဦးက Podcast တခုကိုကြောင့်လည်းစျေးကွက်ဆက်နဲ့သူတို့ရဲ့ဖန်တီးမှုစကားသံကိုဖြစ်လာနိုင်စွမ်းအမှတ်တံဆိပ်အပေါ်ကိုချဲ့ထွင်ရန်သူတို့ကိုကူညီ၌ကြီးစွာသောမက်လုံးပေးပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျး voice နှင့် Authenticate မိမိတို့၏စိတ်ကူးများကိုဖော်ပြနေတဲ့ဖန်ဆင်းရှင်များအတွက်ထိရောက်သောနည်းလမ်းတစ်ခုသာဖြစ်ပါတယ်။ သောကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နည်းပညာဆန်းသစ်ခေတ်, Podcast တခုကိုတည်ထောင်၏အလားအလာကိုကဲ့သို့သောအမျိုးမျိုးသော platform များမှတဆင့်ပိုပြီးလက်လှမ်းဖြစ်လာသည် NAB, ကျောက်ဆူး, Libsyn, SoundCloudအထူးသအနုပညာရှင်တစ်ဦးသူတို့တစ်တွေအကြီးအအမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်လာရန်အလားအလာရှိပါတယ်သိတီထွင်ဖန်တီးမှုဆကျသှယျကူညီပေးဖို့ဒီဇိုင်းထွက်ရှိပါတယ်, နှင့်များစွာသောပိုပြီးမယုံနိုင်စရာ options များ။ Podcast တခုကိုတည်ထောင်တစ်အတော်လေးရိုးရှင်းတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုဖွစျစနေိုပေမယ့်အခုတော့, အချက်ကိုရာအရပျယူမဆိုအလားအလာအမှတ်တံဆိပ်အဝေးရောက်များအတွက်နိုင်ရန်အတွက်, ထို့နောက်ပန်းချီဆရာရဲ့အကြောင်းအရာကထိရောက်သောဖြစ်ဘို့ကနောက်ကွယ်မှအရည်အသွေးအလွန်ကြီးစွာသောသဘောတူညီချက်ရှိရမည်ဖြစ်သည်။ ဖြစ်နေဆဲ
မည်သို့ပင်ကျနော်တို့အကြောင်းကိုအများဆုံးအသည်းအသန်ခံစားရဘာသာရပ်အဘယျသို့အမှု, ငါတို့ရှိသမျှသည်ပေါ်မှာငါတို့အများဆုံးအတှငျးအတှေးအမျှဝေဖို့ဆန္ဒရှိဘာသာရပ်ကလည်း, ကြောင်းပြီးမြောက်နိုင်ရန်အတွက်ကြောင့်ပွတ်နှင့်ကောင်းစွာစနစ်တကျပြုလုပ်ထားရန်ဆာဖြစ်ပါတယ်။ အခုတော့ဒီဖန်တီးမှု Podcasts တစ် script ကိုတက်ရိုက်ထည့်ရန်ရှိသည်သငျ့သညျမြားနှငျ့ hum သူတို့နောက်ဆုံးမှာသူတို့ကိုပယ်မောင်းပါမယ်သောဝိညာဉျသ wrenching ပျင်းဖို့တည်ဆောက်ရန်ကြိုးစားနေပါတယ်ပရိသတ်ကိုစည်ကြောင်းမဆိုလိုပါ။ သို့သော်သိသာကုသိုလ်ယူမဆို Podcasts သူတို့ရဲ့ content တွေကိုများ၏အရည်အသွေးမှတဆင့်အောင်မြင်နိုင်ပြီး, အလွန်ကြီးစွာသော Podcast တခုကိုစေသည်အရည်အသွေးကိုအကြောင်းအရာနှင့်ပတ်သက်ပြီးလေ့လာသင်ယူရန်အကောင်းတစ်လမ်းတက်ရောက်ခြင်းအားဖြင့်ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်ပါတယ် IBC 2019 ။
IBC 2019 မီဒီယာ, ဖျော်ဖြေရေးနှင့်နည်းပညာပြပွဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကနည်းပညာကွန်ဖရ 13 ကျော်ပြသခဲ့သည်နှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်သူများအဓိကဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်သူများနှင့်စာနယ်ဇင်းများ၏ဖွဲ့စည်း 19 တက်ရောက်ကျော်, စက်တင်ဘာလ 2019-1,700 ရိုင်အမ်စတာဒမ်အတွက် 55,000 ရာအရပ်ကိုယူဟုသတ်မှတ်ထားသည်။ သူတို့အလားအလာအမှတ်တံဆိပ်တိုးတက်မှုနှုန်းအဘို့မိမိတို့ Podcast တခုကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်လာနိုငျပုံကိုပိုမိုထိုးထွင်းသိမြင်မှုရဖို့ရန်ရှာနေမဆို Podcasts အဘို့, ထို့နောက် IBC 2019, သူတို့ကိုမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့သူတို့ရဲ့အမှတ်တံဆိပ်တခုအဖြစ်ဖို့အတှကျပလက်ဖောင်းသူတို့နှင့်အတူများကိုကူညီထုတ်ကုန်ဖြန့်ချိ, သူတို့ကထိတွေ့ဆက်ဆံအဖြစ်ဆက်ဆံရေးကိုမိမိတို့ကွန်ယက်ကိုကြီးထွားနိုင်ပါတယ် အလားအလာရှိသောဖောက်သည်များနှင့်သူတို့ကိုနှင့်သူတို့၏ podcast တခုကိုကြီးထွားအောင်ကူညီပေးဖို့လိုအပ်တဲ့တီထွင်ဖန်တီးမှုတိုးမြှင်အပေါငျးတို့သခြေလှမ်းများနှင့်ကျောက်များသိသောစက်မှုလုပ်ငန်းခေါင်းဆောင်များနှင့်အတူ။ IBC 2019 တက်ရောက်ခြင်းအနုပညာရှင်တွေသူတို့ခြောထိုသူအပေါင်းတို့သည်မကြာခဏသူတို့ရဲ့အခြိနျဆှဲအတွက်လူသိများနေသောတိတ်ဆိတ်ဖန်တီးမှုညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းအတွက်သုံးစွဲအတိတ်တစ်နှစ်သို့မဟုတ်နှစ်ခုအဘို့မိမိတို့ဦးခေါင်းများကိုလှည့်ပတ်ပြေးခဲ့ဖူးတဲ့စိတ်ကူးများဆကျသှယျဖို့ခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ်။
IBC 2019 တက်ရောက်ခြင်းအားဖြင့်, မည်သည့်ဖန်ဆင်းရှင်ကိုတင်ပြရန်စီစဉ်ထားသည့်အံ့သြဖွယ်ပြသခဲ့သည်မှဝင်ရောက်ခွင့်ရှိသည်ဖို့နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါအတော်ကြာ IBC 2019 ပြသခဲ့သည် ပါဝင်:
ကို IEEE အသံလွှင့်နည်းပညာ Society က
AWEX - WALLONIA Export and ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအေဂျင်စီ
အဆိုပါ ကို IEEE အသံလွှင့်နည်းပညာ Society က တစ်ဦးအဖွဲ့ဝင်အဖြစ် oriented အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒါဟာထုတ်လွှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်လူတိုင်းနှင့်မဟာမိတ်လယ်ကွင်းမှဖွင့်လှစ်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့မစ်ရှင်နောက်ထပ်၎င်းတို့၏ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အသိပညာတိုးမြှင့်တစ်လမ်းအဖြစ်အဖွဲ့ဝင်လိုအပ်ချက်အစေခံရန်ဖြစ်တယ်, သူတို့နောက်ဆုံးပေါ်သုတေသနရလဒ်များကိုနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းခေတ်ရေစီးကြောင်း၏သူတို့ကိုအသိပေးဖွငျ့ဤမစ်ရှင်ပြီးမြောက်, သာဖန်တီးသူနှင့်အဘို့သန့်စင်ပညာရေးနှင့်ကွန်ရက်အခွင့်အလမ်းများကိုနှစ်ဦးစလုံးသည်ကကူညီနိုင်သည့် သူတို့တည်ဆောက်ရန်ဆန္ဒရှိအမှတ်တံဆိပ်။ BTS မှာထွက်စစ်ဆေးနေခြင်းအားဖြင့် ခန်းမ2- 2.A60,ခန်းမ 8 - 8.F51, ဖန်တီးသူထိုကဲ့သို့သောသူတို့ပူဇော်သင်တန်းအဖြစ်မယုံနိုင်စရာန်ဆောင်မှုမှဝင်ရောက်ခွင့်, စီးပွားရေးနှင့်နည်းပညာအပေါ်သတင်း, သူတို့ရဲ့အလုပ်ဖြစ်စဉ်ကိုရပါလိမ့်မယ်, နှင့်မည်သို့သူတို့ပိုကောင်းတဲ့သူတို့ရဲ့ Podcast တခုကိုများအတွက် subscriber များအားစီမံခန့်ခွဲကူညီပေးနိုင်ပါသည်အယောင်ဆောင်နှင့်အပေါင်းအဖေါ်များ '' Pavilion ။
ဒါကြောင့်စျေးကွက်နှင့်လိုအပ်သောချဲ့ထွင်ရန်ကြွလာသောအခါ, ဖောက်သည်ကိုအလွန်ကြည့်ခြင်းဖြင့်အသုံးပြုသွားမည်နိုင် အဆိုပါဂရိတ်ဗြိတိန်နှင့်မြောက်အိုင်ယာလန် Pavilion ဘယ်လိုလူတွေထုတ်ကုန်န်ဆောင်မှုများနှင့်နည်းပညာများတစ်ကျယ်ပြန့်အကွာအဝေးဖေါ်ပြခြင်းဖြင့်အသုံးပြုပုံကမ္ဘာ့အရေးပါဆုံးနည်းပညာမှာအကောင်းဆုံးစီးပွားရေးလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကို select ကူညီပေးနေအပေါ်စင်တာ။ ဤသည်တဲပို့ကုန်များအသုံးပြုခြင်းမှတဆင့်နိုင်ငံတကာစျေးကွက်မှာသူတို့ရဲ့အောင်မြင်မှုသေချာစေရန်ဗြိတိန်အခြေစိုက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကူညီပေးသည်ပေးသောနိုင်ငံတကာကုန်သွယ်ရေး (DIT) အတွက်ဦးစီးဌာနတို့ကထောက်ခံသည်။ techUK အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းနှစ်ခုလုံးကိုထုတ်စစ်ဆေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်တဲ့အထောကျအကူအရင်းအမြစ်နိုင်ပါတယ်မည်သို့ပိုမိုသိရှိလိုပါက www.techuk.org နှင့် www.great.gov.uk/international/။ သူတို့ဟာ၌ဖြစ်လိမ့်မည် ခန်းမ5- 5.B48, ခန်းမ 8 - 8.B38, ခန်းမ 10 - 10.A42.
အဆိုပါ AWEX-Wallonia ပို့ကုန်ပြီးတော့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအေဂျင်စီ Wallonia ရဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစီးပွားရေးဆက်ဆံမှုများ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုအကြီးအကဲလည်းဖြစ်သည်။ အဆိုပါ Wallonia အေဂျင်စီရဲ့မြှင့်တင်ရေးနှင့်သတင်းအချက်အလက်မက်လုံးပေးသည့်နိုင်ငံတကာနှင့် Walloon အဘိဓါန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအသိုင်းအဝိုင်းနှစ်ခုလုံးမှ, နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်ရေးနှင့်နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှစ်ဦးစလုံးအတွက်အထူးပြုပိုကောင်းမြှင့်တင်ရေးများ၏ကိစ္စရပ်များအတွက်အရည်အသွေးကျွမ်းကျင်မှု, အလားအလာရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ prospecting နှင့်အသိပေးပေးဆောင်ရွက်ပါသည်။ ဤသည်သာနောက်ထပ်သူတို့ထပ်မံကြီးထွားနှင့်၎င်းတို့၏ဖန်တီးမှုစကားသံကိုနောက်ဆုံးမှာလမျးညှနျခ၏ညာဘက်မျိုးနှင့်အတူရှိနိုင်ပါသည်အမှတ်တံဆိပ်အပေါ်ကိုချဲ့ထွင်နိုင်ပုံကိုလေ့လာစူးစမ်းဖို့ဖန်တီးသူများအတွက်အများအပြားရွေးချယ်စရာတစ်ဦးအဖြစ်ဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်။ Awex တှငျကငျြးပခဲ့ပါလိမ့်မည် ခန်းမ 10 - 10.D31.
အဆိုပါဖော်ပြခဲ့တဲ့ Pavilion အတူဖန်တီးသူလည်းထုတ်စစ်ဆေးနိုင်ပါလိမ့်မည် ဘေဂျင်း Pavilion ကြောင်းတှငျကငျြးပခဲ့ပါလိမ့်မည် ခန်းမ3- 3.A21, ပြီးနောက် ကိုရီးယား Pavilion in ခန်းမ2- 2.A31။ ဖန်တီးသူကိုထိရောက်စွာ Podcast တခုကို၏ဆန်းသစ်တီထွင်မှုမှတဆင့်တစ်ဦးအမှတ်တံဆိပ်သို့သူတို့ရဲ့ဖန်တီးမှုစကားသံကိုစျေးကွက်ဘယ်လိုပိုကောင်းတဲ့ထိုးထွင်းသိမြင်မှုရရှိနိုငျဘယ်လိုပိုကောင်းသတင်းအချက်အလက်များအတွက်သူတို့သွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ် show.ibc.org အကောင်းတစ်ဦးဦးခေါင်းစတင်ရဖို့။
ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ဒစ်ဂျစ်တယ် Nirvana ဂရေဟမ်ချပ်မန်း Prmoted toEditor IBC မီဒီယာစောင့်ကြည့်ရေး NAB ပြရန် podcasting စာတန်းထိုး စာတန်းထိုး, ဒစ်ဂျစ်တယ် Nirvana, မီဒီယာစောင့်ကြည့်ရေး, IBC က Ultra HD ဖိုရမ် ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် 2019-08-02
ယခင်: Intraplex® Ascent ပို့ဆောင်ရေးပလက်ဖောင်းသို့ IP ကိုပံ့ပိုးကျော် GatesAir Integrated ဗီဒီယို